नेपालमा कोरोना : उपत्यका २९८ जना नयाँ संक्रमित, मृत्यु हुनेको संख्या २२८ – Akhabar Today
नेपालमा कोरोना : उपत्यका २९८ जना नयाँ संक्रमित, मृत्यु हुनेको संख्या २२८
काठमाडौं, १५ भदौं । नेपालमा सोमबार थप ८९९ जना संक्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ८९९ जना संक्रमित फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो । संक्रमितमध्ये ३३० महिला र ५९६ पुरुष छन् । आइतबार मात्रै १२ सय ११ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
यस्तै, सोमबार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै थप २९८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उपत्यकाका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप २९८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौंका १९० जना, भक्तपुरका ४१ जना र ललितपुरका ६७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ ।
यस्तै, कोरोनाबाट थप ७ जनाको मृत्यु भएको छ । योसहित नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या २२८ पुगेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा.गौतमका अनुसार २४ घण्टामा ७ जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या २२८ पुगेको हो ।
मृत्यु हुनेमा ३ महिला र चार पुरुष रहेका छन् । सोमबार कोरोनाबाट मृत्यु हुनेमा महोत्तरीमा एक बालिका वर्षीय, गोरखामा दुई महिला र झापा, रौतहट, चितवन र भक्तपुरमा एकर एक गरी चार पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमका पीसीआर परीक्षण गरिएका ११ हजार १२९ स्वाबमध्ये ८९९ स्वाबको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो । योसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ३९ हजार ४६० पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या २१ हजार ४१० पुगेको छ ।
अहिले क्वारेन्टाइनमा ७ हजार ३३७ जना रहेका छन्। नेपाल सक्रिय संक्रमितको संख्या १७ हजार ८२२ रहेको छ । संस्थागत आइसोलेसनमा १० हजार ७०१ जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा ७ हजार १२१ जनाको उपचार भइरहेको छ ।
बागलुङ अपडेट : १४ शव भेटियो, २४ अझै बेपता
सुदूरपश्चिम : स्वास्थ्य संस्था छन्, उपकरण छैनन् !
सात वर्षीया प्रिन्शाको उडान : भिडियोदेखि ‘मिनी मोडल वल्र्ड’सम्म